တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း: ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အကြောင်းပြချက် ၁၀ ခု စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း: အကြောင်းပြချက် ၁၀ ချက်
စတိုင်လ်အမျိုးသားများ | | အချိန်အား, စုံတွဲနှင့်လိင်
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းရှိလူတိုင်းနီးပါးကသဘောမကျခဲ့သည်။ သို့သော်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှလူအများစုတို့သည်အခါအားလျော်စွာကျင့်သုံးရန်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝန်ခံသောအလွန်အသုံးများသောအလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အချိန်များဤမျှလောက်ပြောင်းလဲသွားတယ်ပါပြီ ကိစ္စများစွာတွင်ဆေးပညာရှင်များသည်မြီးကောင်ပေါက်များကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေရန်တိုက်တွန်းသည် ဒါကြောင့်သူတို့အဘို့အလွန်အကျိုးရှိသောနိုင်ပါတယ်ကတည်းက။
သေချာတာပေါ့၊ ဒီဝေးကိုဖတ်ပြီးတဲ့သူတော်တော်များများကလုံးဝသဘောမတူကြဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ဆောင်းပါးကိုမင်းတို့တင်ပေးမယ့်ဆောင်းပါးကိုပြင်ဆင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အခြားအရာများအပြင်ကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်အကျိုးရှိသည်.
ဟုတ်ပါတယ်၊ ပုံမှန်အတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက် ၁၀ ခုမသွားခင်၊ ဒီအလေ့အထကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းသည်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော်လည်းအခြားအရာများကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
3 Lucid ၏ပြန်လာ
5 သင်နှင့်တူသောမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကမျှအပြည့်အ ၀ ပျော်မွေ့ခြင်းကိုမတွေ့ရပါ
ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုကျွန်ုပ်တို့သိသကဲ့သို့ရှာဖွေလေ့လာနိုင်သည့်မည်သူ့ကိုမျှမစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာများ၊ ဦး ခေါင်းများသို့မဟုတ်ခြေထောက်များကိုတို့ထိသကဲ့သို့စမ်းသပ်ရန်နှင့်စူးစမ်းရန်၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်လိင်တံနှင့်၎င်းကိုဝန်းရံနေသောအာရုံခံစားမှုအားလုံးကိုသိရန်စိတ်ကူးဖြစ်သည်.
သင်တို့အများစုသည်ထိုအရာကိုသတိမထားမိကြသော်လည်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကကာယရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်အတန်းကိုသက်သာစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အလွန်ရှည်သောစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ပြိုင်ပွဲများအပြီး တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်လျင်မြန်စွာအိပ်ပျော်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်သည်ခံစားမှုပေါင်းများစွာကိုမခံစားမှီလေးမှာသင့်ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေပြီးပျော်ရွှင်မှုများစွာကျန်ရှိစေမှာပါ။
လွန်ခဲ့သောအချိန်ကမိတ်ဆွေကောင်းတစ် ဦး ကသူသည်အရက်အလွန်အကျွံသောက်သုံးခဲ့ဖူးသည့်တစ်ညတွင်အလုပ်မသွားမီတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်သူ့အားတစ်နေ့လုံးထက် ပို၍ ပို၍ ရှင်းလင်းစေသည်ဟုပြောခဲ့သည်။ ငါဘယ်တော့မှမကြိုးစားဖူးဘူး၊ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကတော့ငါ့ရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းကလုံးဝယုံကြည်စိတ်ချစွာပြောခဲ့တယ်၊ သူကကျွန်တော့်ကိုလမ်းပြပေးချင်တယ်ဆိုရင်ငါနားမလည်တာကသူဟာသူ့အကြံဥာဏ်ကိုငါမလိုက်ခဲ့လို့ပဲ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အကြောင်းပြချက်ငါပြီးသားကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူမိုက်လူတစ် ဦး ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ငါတို့လည်းပြောနိုင်တယ် တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကချစ်ခြင်းမေတ္တာအားလိင်မှခွဲထုတ်ရန်သင်ယူစေသည်။ သင်တန်း၏စကားစုသည်ကျွန်ုပ်၏စကားမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်အော်ဂဇင်ရှိခြင်းသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ခြင်းကိုမဆိုလိုပါ။ ကိစ္စများစွာတွင်အလွန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ရန်အရေးကြီးသည်။
တစ်ခါတစ်ရံဘ ၀ သည်အမျိုးသမီးများအပေါ်ကျောထောက်နောက်ခံပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသက်သာရာရစေရန်နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကို အသုံးချ၍ အခြားရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပါ။
အကယ်၍ သင်တစ်ယောက်တည်းနေခြင်း၏ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာရှိပါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အခြားအရာများမလုပ်နိုင်ခြင်းစသည့်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုသင့်တွင်ရှိပြီးဖြစ်သည်၊ ၎င်းတို့သည်ထိန်းချုပ်မှုမရှိဘဲအစာစားခြင်းကဲ့သို့သောသူတို့သည်သင့်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုယူဆောင်သွားမည်မဟုတ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ တစ်ယောက်တည်းနေခြင်းဟာအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးဆင်ခြေမဖြစ်ဖို့သတိထားပါ၊
သင်နှင့်တူသောမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကမျှအပြည့်အ ၀ ပျော်မွေ့ခြင်းကိုမတွေ့ရပါ
ငါပြောခဲ့သလိုပဲတစ်ခါတစ်လေမမှန်ဘူး၊ ငါတို့ကိုကောင်းကင်ကို ဦး ဆောင်လမ်းပြနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေ၊ အမျိုးသားတွေရှိတယ်၊ နောက်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းရဲ့အပျော်အပါးကိုရောက်သွားတယ်။
ကျွမ်းကျင်သူများစွာ၏အဆိုအရတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွင်းရှိလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအချို့ကိုရှောင်ရှားရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများအတွက်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်းနှင့် anorgasmia.
ဤအရာကို ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ဤလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများကိုတိုက်ဖျက်ရန်အပြုသဘောရှိကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြရမည်။ သို့သော်ပိုလျှံမှုသည်အခြားပိုမိုဆိုးရွားသည့်ပြcomplicatedနာများနှင့်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအခြေအနေသို့ ဦး တည်နိုင်သည်။ မင်းလက်တွေ
ဒီသီအိုရီကငါတို့မြင်ခဲ့တဲ့အခြားသူတွေလိုနည်းနည်းထူးဆန်းနေတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူများစွာ၏အဆိုအရအော်ဂဇင်ပြုခြင်းကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အလေ့အကျင့်ရှိသည့်အမျိုးသမီးများသည်နောက်ပိုင်းတွင်သူတို့နှင့်ရင်းနှီးသောသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူအမျိုးသားများနှင့်ပျော်မွေ့နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒီယောက်ျားလည်းပိုမိုအတိုင်းအတာအထိလိင်ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ဒီဟာကဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့ထွက်ခွာဖို့သင်စောင့်နေရတဲ့အကြောင်းအရင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ထက်တန်းတူ (သို့) ပို၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့်ယခင်စာပေများကိုသင်ဖတ်ရှုရန်အဆုံးသတ်ခါနီးပြီဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
အတော်ကြာဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များနှင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့အများအပြားလေ့လာမှုများအရသိရသည် တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကသွေးလည်ပတ်မှုကိုတိုးစေသည်၊ စိတ်ဖိစီးမှုကိုတိုက်ထုတ်သည်။ ထို့အပြင်အမျိုးသမီးများတွင်အမျိုးသမီးဖတ်နေလျှင်၎င်းသည်ခွန်အားကိုပေးသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာလိင်ဆက်ဆံခြင်းပြုစဉ်အသုံးပြုသောကြွက်သားများကိုဖြေလျော့ပေးခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။
ငါလေးလံနေတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ငါဟာငါဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပေမယ့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်သင့်ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ သူကအလွဲသုံးစားမှုပြုလျှင်၎င်းသည်အပျက်သဘောဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်နေ့လျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါ ထပ်မံ၍ သွားခြင်းမရှိဘဲလိင်တံကိုအနာတရဖြစ်စေသောကြောင့်နာကျင်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုတွန်းအားပေးရန်တိုက်တွန်းချက်ကိုဖယ်ရှားရန်သင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုတိုးပွားစေပြီးသင်တစ်နေ့လုံးပင်ပန်းနွမ်းနယ်စေနိုင်သည်ကိုသင်သိသင့်သည်။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်ကောင်းသည်ဟူသောခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်သင်ဖတ်ရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာ၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်မှားယွင်းစွာဖြစ်ပြီးအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြသင့်သည်။ Kinsey အစီရင်ခံစာအရ အစောပိုင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ခဲ့သူများသည်ပိုမိုတက်ကြွသောလိင်မှုဘ ၀ ရှိသည် နှင့်ကြာကြာ "။
သေချာတာကသူတို့ဟာသူတို့လုပ်တဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အစီရင်ခံစာတစ်ခုကနေဒီကိုခိုင်မာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်အချိန်ပိုမဖြုန်းတီးနဲ့၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုမလုပ်ပါနဲ့၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ရှည်လျားပြီးတက်ကြွသောလိင်မှုဘဝကိုလိုချင်သည်ဟုထင်နေသောကြောင့်၊ ¿ဒါမှမဟုတ်မလုပ်တဲ့သူရှိလား။
သင်၏လိင်တံ၏ကြွက်သားများကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်၎င်း၏အရွယ်အစားကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာတိုးချဲ့ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တစ်ခုတည်းသောသို့မဟုတ်အထိရောက်ဆုံးမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်ဖတ်ရန်အကြံပြုထားသောအကြောင်းအရာကိုသင်စိတ်ဝင်စားပါက လိင်တံကိုချဲ့ရန်နည်းစနစ်အပေါ်ဤဆောင်းပါး.
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကဲ့သို့သောစိတ်ဓာတ်နှင့်ဆန့်ကျင်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်ခြင်းသည်ဘာမျှမမှားပါ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးနိုင်သည်။
ကံကောင်းတာကအချိန်ကာလဟာအပြောင်းအလဲမြန်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဘယ်သူ့ကိုမှအားမပေးတော့ဘူး၊ တစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုနေ့စဉ်အခြေခံကျင့်သုံးကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသူအနည်းငယ်ကတော့မနှစ်သက်ပါဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်လို့ပဲ၊ က။
သင်၌သံသယများစွာရှိသေးသည်ဆိုလျှင်၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်ကောင်းသောအကြောင်းပြချက် ၁၀ ခုကိုသင်ဖတ်ပြီးပြီလဲ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်ပါကသင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ဘာကြောင့်ကောင်းသည့်အကြောင်းရင်း ၁၀၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောအကြောင်းပြချက်ကိုပေးနိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ ထို့အပြင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်မကောင်းသော (သို့) အကျိုးမရှိသောအကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုကိုရှာဖွေရန်ကိစ္စရပ်များမှအပလက်တွေ့ကျကျမဖြစ်နိုင်ကြောင်းသတိရပါ။
ဟုတ်တယ်၊ နှုတ်ဆက်ခြင်းမပြုမီငါထပ်ခါတလဲလဲပြောရမယ် တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ကောင်းပေမယ့်ကောင်းပါတယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုသင်ကယောက်ျားဖြစ်စေ၊ မိန်းမဖြစ်စေသင့်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » အချိန်အား » တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း: အကြောင်းပြချက် ၁၀ ချက်
46 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
လွန်ခဲ့တဲ့ 12 အနှစ်
ကားလို့စ် Marroquin ဟုသူကပြောသည်
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလှူငွေ ... အလယ်အလတ်သို့မဟုတ် ecxeso အားလုံးကိုမျက်စိ။
Carlos Marroquin ကိုပြန်ပြောပါ
အလက်ဂျန်းဒရို လီဒူအင်း ဟုသူကပြောသည်
alejandro liduin အားပြန်ပြောပါ
ဒီအထီးကျန်တဲ့အချိန်တွေရှိခြင်းဟာကောင်းတယ်၊ ဒီဆောင်းပါးနဲ့အဆင်ပြေတယ်၊ ​​မကောင်းတဲ့ပုံပေါ်ပေမဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းပြီးလိင်ဘဝကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကိုပိုသိလာတယ်။
အမှန်မှာပုဂ္ဂလဒိive္ဌာန်ကျကျထင်မြင်ယူဆချက်တစ်စုံတစ်ရာကကျွန်ုပ်သည်ဤသည်စိတ်ဓာတ်ကျသူများအတွက်အကြံဥာဏ်ဟုထင်ရသော်လည်းကျန်းမာသန်စွမ်းသောသာမန်လူတစ် ဦး သည်၎င်းကိုမလိုအပ်ပါ၊ လိင်ကိုစုံတွဲတစ်တွဲအနေဖြင့်လေ့လာပြီးကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အမှန်တရားကတော့ကျွန်ုပ်အတွက်တော့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့မလိုတော့ပါဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကအချိန်ကြာမြင့်စွာလေ့ကျင့်ပြီးသားဖြစ်ပြီး၊ မင်းကမင်းရဲ့ရည်းစားကိုရှာပြီးသူနဲ့အတူလေ့ကျင့်ဖို့အကြံပေးချင်တယ်။
ဒေါ်လာသန်းနှင့်ချီသောမေးခွန်းသည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုနေ့တိုင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာမဖြစ်စေပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်သင်အလွန်အကျွံမကောင်းသောကြောင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြုလုပ်သောအခါသင်ချစ်သောသူသည်ကျန်းမာစွာစားသောက်ခြင်း၊ ဘက်ထရီကျေးဇူးတင်စကား load ။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း armando reyes ၏ကောင်းသောဆောင်းပါး
Armando Reyes အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၄၂ နှစ်ရှိပြီး ၂၁ စင်တီမီတာရှိသောလိင်တံနှင့်အားကောင်းသည့်စိုက်ထူမှုတစ်ခုနှင့်အတူနိုးထနေဆဲဖြစ်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့လိင်တံကြီးကြီးတစ်ခုရှိခြင်းဟာလူတစ်ယောက်ကိုအစောပိုင်းခွန်အားမရှိအောင်ဖော်ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အတွေးကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစိတ်နာကျင်နေရတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့အကျင့်ကိုရပ်တန့်မသွားဘူးဆိုရင်၊ ငါ့ဘက်မှာမိန်းမတစ်ယောက်ရှိနေပေမယ့်၊ အများဆုံးအပျော်အပါး။
လွန်ခဲ့တဲ့ 11 အနှစ်
မင်းကိုချစ်မိအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလှပတင့်တယ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ 21cm uuuuaaaaauuuu ငါမင်းကိုဘယ်ကလဲလို့ပြောပြပြီးမင်းရဲ့ပုံကိုတင်ရတာငါအရမ်းချစ်တယ်။
ကောင်းပြီ၊ တစ်နေ့လျှင် ၅ ကြိမ်၊ တနင်္လာနေ့မှတနင်္ဂနွေမှ ၁ ရက် ၃၁ ရက်၊ ဇန်နဝါရီလမှဒီဇင်ဘာလအထိစသည်တို့ဖြစ်သည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး နားလည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တင်းနစ်ကစားသမား
seeee !!! ငါအခုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာပေါ့၊ ဟားဟား
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ pajon ကိုပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာသင့်လက်ချောင်းကဆူညံသံတွေအများကြီးရှိတယ်
hahaha, roni နှင့် ralf ကြွက်များမှာ !!!! ငါဒီအလှူငွေကအရမ်းကောင်းတယ်ထင်ပါတယ် သံသယများစွာကိုရှင်းပစ်သည်။
ဒါကြောင့်ငါနေ့တိုင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကအကောင်းဆုံး hahaha 😛
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဟာအရသာရှိတယ်။ ငါအသက် ၁၃ နှစ်၊ ၁၉ နှစ်အရွယ်ကတည်းကငါလုပ်နေတာ။ ငါက IS ... Rich ။ နေ့တိုင်းလုပ်တယ်၊ တစ်ခါတလေပြန်လုပ်တယ်
‹I› ဟက်ကာ ‹/i> ‹b› ha ‹/b› ‹a› ha ‹/a› ကြီးမြတ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော်ဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ချဲ့ကားပြောဆိုနေတာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ သိပ်မကောင်းဘူး၊ ဒါကိုကျွန်တော်မထောက်ခံဘူးလို့ပြောတယ်၊ ပိုလျှံအားလုံးဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေတယ်။
Diego မှဂျေ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ဖြစ်သော်လည်း၊ ငါသုတ်လိမ်းရန်နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည်ကြာကြာဆက်လက်နေရန်နှင့်၎င်းသည်အစမှအဆုံးအထိတစ်နာရီနီးပါးကြာသောကြောင့်၎င်းသည်မကောင်းပါသလော။ ကျွန်တော့်ဇနီးကိုကိုယ်ဝန်ရစေဖို့ပြbringနာတွေဖြစ်စေနိုင်မလား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Diego J. ကိုပြန်ကြားခြင်း
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်နေ့လျှင် ၃ ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်စူပါကောင်းသောခံစားမှုဖြစ်သည်။ အချိန်ရှိသူများအားလုံးကို၎င်းတို့သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေရန်အကြံပြုပါသည်၊
ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုရန်အလွန်ပင်ကျွန်ုပ်သည်လေးစားစွာဖြင့်သူတို့ကိုအနည်းငယ်မှတ်ချက်ပေးလိမ့်မည်။ ငါအသက်ခြောက်နှစ်အရွယ်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ခဲ့တယ်၊ ငါကစွဲလမ်းမှုဖြစ်လာပြီလို့ပြောခဲ့တယ်၊ အဲဒါကိုငါဘယ်နေရာမှာမဆိုလုပ်နိုင်တယ်။ အဲဒါကိုငါ ၂၈ နှစ်အထိယူခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာကအရမ်းစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်။ , ကောင်းပြီကြိမ်များရှိခဲ့ဖူး In k ကျွန်ုပ်သည်တစ်နေ့လျှင် ၅ ကြိမ်ပိုလုပ်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်၏မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၊ အချိန်ကုန်လွန်သွားသောအရာသည်ကျွန်ုပ်ကိုစတင်ပြသခြင်းကြောင့်အပြစ်ရှိသည်ကျွန်ုပ်အားအနိုင်ရသဖြင့်အလွန်စိတ်ဓာတ်ကျစေသည်။ စိတ်ဓာတ်နိမ့်ကျသည်ကိုကျွန်ုပ်အလွန်တွေ့မြင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ကျင့်တရား၌ (၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်သည်) ak တစ်ယောက်သည်အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါ၊ ငယ်ရွယ်သောသူငယ်ချင်းများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါဤအရာများကိုရင်ဆိုင်ရန်မည်မျှခက်ခဲသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာပဲ၊ ငါဟာငါ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်ကိုဒီလောက်အတိုင်းအတာအထိသယ်ဆောင်လွန်းလို့ငါအရမ်းမလုပ်ပါနဲ့၊ အဲဒါကိုငါအရမ်းအသုံးတည့်တဲ့အတွက်သူကအရမ်းရှက်စရာကောင်းတယ်။ ဒါကငါ့အဆိုးဆုံးပဲမဟုတ်ဘဲငါဟာဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်၊ ငါ့ဘ ၀ မှာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုသိရမယ်ဆိုရင်ငါ့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကို သူတို့မှာငါကအရာရာတိုင်းအတွက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာတွေနဲ့ဆုချသင့်တယ်။ အသစ်တစ်ခုခုဝယ်လိုက်တယ်။ ငါနေရာတစ်ခုသို့ရောက်လာသည်။ ငါကြိုက်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံးသတိရမိသည်မှာငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့လိုသည်မှာဤအရာသည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အချက်အချာဖြစ်သကဲ့သို့ အခြားသူများ၊ သူငယ်ချင်းများ၊ သင့်အား km km ပြောပြသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်အမင်းနစ်မြုပ်နေသည့်အပြစ်ကိုကျွန်ုပ်အတွင်း၌သိမ်းထားပါ။ ကျွန်ုပ်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်ဘယ်သွားသွား၊ မည်သို့ထိန်းသိမ်းရမည်၊ ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်ပြုသည်၊ ကျွန်ုပ်သာကျွန်ုပ်သိသည်။ ပယ်ချ၊ ညစ်ညစ်၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ကျင့်တရားသုညဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တစ် ဦး တည်းသာဝက်သားကိုအလွန်ငိုကြွေးရန်ထွက်ခွာသွားသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုတောင်းခံ။ ၎င်းသည်တကယ်စိတ်ဓာတ်ကျလျှင်ကောင်းကျိုးများစွာရှိသည်ဟုငြင်းဆိုသည်။ ပြောပေမယ့်ငါအကျဉ်းချုံးလိမ့်မယ်, ဒီငါ့ကိုလိင်တူဆက်ဆံခြင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ချင်လာတယ်ဒါပေမယ့်ပျော်ရွှင်စွာငါမလုပ်ခဲ့ဘူး, သူ့ကိုငါသာဘဝမှာ MASTURBATION ၏အလွန်အကျွံလိင်တူချစ်သူမှ ဦး ဆောင်လမ်းပြများနှင့်သင်တို့ကိုငါအလေ့အကျင့်သည်ဟုမယုံကြည်ပါဘူး, သင်ရချင်တယ် ဒီအခြေအနေကိုငါအသေးအဖွဲအဖြစ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်စတင်သောအခါငါ KM ငါ့ကို FOR PORK အဖြစ်အပျက်ကဘာဖြစ်ပျက်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုငါပြောပြပါမယ်။ CUPACION K သည်ခြေလှမ်းတိုင်းကိုသယ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ KM သည်စိတ်ပျက်အားလျော့ခြင်းကို KM ထည့်လိုက်လျှင်အထပ်ကိုမရှာဖွေဘဲအမှန်တကယ်ဒီခြေကုပ်ကကျွန်ုပ်ဘဝကိုကျွန်ုပ်ခံစားသည်။ KI ကိုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကိုသာမြုပ်နှံထားသည်။ ရပ်တန့်ရန်အလွန်အကျွံလုပ်ဆောင်ပါ၊ ၎င်းကိုသင်မရှာပါကကျွန်ုပ်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်သည် (၃၁) နှစ်မတိုင်မီကရူပဗေဒရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်သည် (၃၁) နှစ်မတိုင်မှီကအဖြစ်အပျက် ၃ ခုမလုပ်နိုင်သေးပါ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်များက
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏စွဲလမ်းမှုကသင်၏နေ့ရက်များ၊ သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစု၊ သင်လိုချင်သည့်အရာများနှင့်သင်မသိသော၊ ပျော်မွေ့လိုသောအရာများကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။ သင်၏ဘဝကိုမဖြစ်စေပါနှင့်၊ သို့သော်သင်၏ဘဝတစ်လျှောက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ၊ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကိုကျွန်ုပ်သိသောကြောင့်၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပြုတော့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် prno အနည်းဆုံး ၁ မိနစ်ကိုတွေ့ပါကသင်ပျင်းသည်အထိ၊
လွန်ခဲ့တဲ့ 10 အနှစ်
ငါ putes fuck ဆိုတဲ့သို့မဟုတ်သွားကြဖို့ကြိုက်တတ်တဲ့အနည်းဆုံးသင်ကလူကိုသိ။
ငါကအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်2သို့မဟုတ်3ကြိမ်လုပ်ပါ ...
နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့လိင်တူချစ်သူတွေအားလုံးဟာမြည်းကောင်းတစ်ကောင်ရပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ blowjobs တွေမပေးတော့ပါဘူး။ သူတို့ idiots အဘို့မိမိတို့လက်ပေါ်ဆံပင်ရဖို့မသွားလျှင်! ဟားဟား။ သင်၏သူငယ်ချင်းနှင့်မတူကွဲပြားသောစိတ်ဖိစီးမှု၏ဝိညာဉ်နှင့်သင်ကဲ့သို့သောစိတ်နေမကောင်း .. သင့်ကိုဆံပင်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနှင့်နမ်း!
Uuuf ငါ cum oooh တကယ်ကောင်းတဲ့အရာပဲ၊ သူ့ကိုနို့စို့ပေးချင်ရင်ဒါမှမဟုတ်လက်ဆွဲအိတ်ဆောင်ဒါမှမဟုတ်အပြန်အလှန်ပေးချင်ရင်ငါတဖြည်းဖြည်းဆုတ်သွားတာကိုငါနှစ်သက်တယ်။ ငါနင့်လျှာနဲ့နည်းနည်းနို့စို့စို့လာလိမ့်မယ်။ မင်းကိုပျော်အောင်လုပ်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ သူကအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေကိုဂရုမစိုက်ဘူးလို့ပြောပြီးမှတ်ချက်ပေးသူနဲ့စကားပြောနေတာပါ။ wassap 663000157 နှုတ်ခွန်းဆက်သူတစ်ယောက်အကြောင်းပြောပါ။
ufffffffffff! ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ…။ ငါမကောင်းဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ် ငါတစ်နေ့6ကြိမ်လုပ်ပါ
အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်၊ ဒါဟာ MASTURBATE ရဲ့လူသားရဲ့သဘာဝအပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမင်းကိုပြောပြချင်တယ်။ သို့သော်အရာအားလုံးအတွင်းရှိအရာအားလုံးသည်အန္တရာယ်ရှိသည်၊ ပြုပြင်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုလုပ်ခြင်းသည်အန္တရာယ်မဖြစ်စေပါ။ ကိုယ်ခန္ဓာ၏စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းသည်လူသား၏အဓိကအပိုင်းဖြစ်သည်။ သင့်ကိုယ်သင်၊ သင်နှစ်သက်သောအရာများ၊ ပျော်ရွှင်မှုများကိုသိပါ။
hello MY WHATSAPP သည် 50373529626 MASTURBATE နှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်လိုသောမိန်းကလေးများအားလုံးအတွက်
ကောင်းမွန်သောနေ့လည်ခင်းကျွန်ုပ်သည်ဤအရေးကြီးသောစာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၃၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည့်ကိုလံဘီယာမှအသက် ၃၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သောကိုလက်စထရောနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည် ၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ သုံးနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်မွေးမြူရန်နေ့ရက်များနှင့်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနှင့်ယနေ့ညမွန်းလွဲ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန်းလှန်နိုင်ဖို့ ၁၉၈၄ ခုနှစ်မှာကျွန်ုပ်ဟာ (၃၁) နှစ်ကြာအောင်ကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီ။ ORGASM E FIN MAURICIO ကိုမရောက်မချင်းကျွန်ုပ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်။
ကောင်းမွန်သောနေ့လည်ခင်း၌ထပ်မံပြောကြားသည်မှာ MASTURBATION သည်မည်သည့်အရာမဟုတ်ပါ၊ အပြစ်မပြုရ၊ သေသည်ဖြစ်စေခိုးယူခြင်းနှင့်အပိုထပ်ဆောင်းခြင်းဖြစ်သည်ဆိုပါက အကယ်၍ ကလေးတစ် ဦး သည် MASTURBATES သည်အစောပိုင်းအရွယ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မိဘများသည် HEASTS တွင်လိမ်ညာမှုမရှိပါ။ MASTURBATION ဆိုသည်မှာ၎င်းသည်အပြစ်ဖြစ်ပြီးမျိုးရိုးဗီဇသည်လိမ်လည်မှုဖြစ်ပြီးညစ်ညမ်းသောသတ္တဝါများဖြစ်ပြီး MASTURBATION သည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအတွက်ကျန်းမာရေးနှင့်အဆုံးအတွက်အလွန်ကောင်းသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ကျန်းမာပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် ၁၂ မှယနေ့အထိညစ်ညမ်းခြင်းကိုကြည့်ရှုခြင်းမှစတင်ခဲ့ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၉ နှစ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဆက်လက်၍ ဘုရားသခင်နှင့်ပေါင်းစည်းပြီးလက်ထပ်ထိမ်းမြားရမည်၊ ထို့နောက်ကွန်ဒုံးနှင့်ခွေးများဖြင့်လိင်ဆက်ဆံရမည်ကိုငါဆက်လက်ကြည့်ရှုနေဆဲဖြစ်သည်။ အဟောင်းကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့ကအကောင်းဆုံးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ဤတွင်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်တူသည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ရှိလျှင် x တစ်လသို့မဟုတ် x နှစ် xx သင်ကလေးများရုတ်တရက်ထွက်လာသည့်နေ့တွင်သင်အလိုရှိသည့်နေ့တိုင်းလုပ်နိုင်သည် ပထမဆုံးအကြိမ်သူတို့ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာသူတို့ကိုပြောပြလိမ့်မည်။ ကြီးလေးသောလိမ်လည်မှုအားလုံးသည်ကလေးတွေဘုရားရှိခိုးကျောင်းသို့လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီးခက်ခဲသောအချိန်၌ယောက်ျားများသည်အဆက်ဖြတ်ခြင်းနှင့်လိင်အကြောင်းသိရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အမှားတစ်ခုဖြစ်ပြီးကလေးများသည်အထူးဂရုပြုရန်လိုပြီး၎င်းသည်စွဲလမ်းမှုဖြစ်လာနိုင်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်မှာသေချာသည်မှာယောက်ျားအားလုံးနီးပါးကယင်းကိုကျင့်သုံးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ဂိမ်းမဟုတ်ပါဘူး။
ငါအပိုအားလုံးသည်ဆိုးသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်၊ သို့သော်ငါသည်လည်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အသိပညာ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူတကွတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလည်းပျော်မွေ့သည်၊ လိင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ဘဝရဲ့အခြေခံအစိတ်အပိုင်း။
အေးဂျင့် Provocateur ၏အတွင်းခံကာယ